ZIGOKAKTUS: NOOCYADA, NOOCYO ISKU DHAFAN IYO SAWIRADOODA - SOOSAARKA DALAGGA
Diyaarad dukaanka ah oo ka baxsan marxaladda ubax, Decembrist waa isha la yaab leh korriin hiwaayadeed.
Sidee ayuu ubax u noqonayaa?
Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah zigokaktus this, iyo dhammaantood farxad indhaha intiisa badan xilliga jiilaalkamarka ay jirto qorrax yar oo ka baxsan daaqada iyo midabada midabaysan.
Astaamaha iyo taariikhda
Schlumberger Dadku waxay leeyihiin magacyo badan: Decembrist, Geedka Christmas, Zigokaktus, Barbarin midabka Inta badan si khalad ah isaga loo yaqaan isaga oo aad u la mid ah muuqaalka ripsalidopsis.
Tani waa qaraabo ah Decembrist, laakiin kaliya ninkii beerta nudaha ah ayaa u yeeri kara isku mid ah.
Schlumbergera waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo leh jugged ama wareegsan wareega geesaha.
Ripsalidopsis looma hayo qaybo fara badan oo kala duwan.
Diidmada kala diri for Christmasiyo ripsalidopsis - loogu talagalay hudheello, markaa magaciisa caanka ah - ubaxa cawska.
Si kastaba ha noqotee, labadaba muuqaalka iyo shuruudaha daryeel ee dhirta kuwaasi waa kuwa isdaba jooga ah. Labaduba waxay u baahan yihiin nasasho nasasho ah, taas oo ah, inay joogaan meel qabow oo aan ku dhoweyn wax waraabinta, haddii kale ma sugi kartid ubax.
Horaantii dabeecadda, Decembrists waxay la kulmeen oo kaliya ubaxyo cas iyo caddaan. Noocyada kala duwan ee Schlumbergera - natiijada shaqada ee breeders.
Xigasho xaga qaldan ee xagaaga, zigocactus waxaa loo bedelay qaabka ugu quruxda badan jiilaalka, inta lagu jiro xilliga ubax.
Hoos waxaa ku qoran sawirrada kala duwan ee ubaxa iyo noocyada Decembrist.
Noocyo, noocyo isku dhafan iyo sawiradooda
Nooca nooca Schlumberger, Buckley kori karaa ilaa 40-50 cm, waxaa lagu kala saaraa midab madow oo mugdi ah oo afkoda iyo waaweyn, ilaa 8 cm, ubaxa casaan-guduud ama ubax-casaan. Qaybaha waa kuwo yaryar, oo aan la yiraahdo xuduudaha.
Waxaa loo tixgeliyaa ugu badnaan joogto ah of Decembrists.
Noocyo kala duwan oo lagu saldhaqaaqo noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ayaa kala duwanaayo noocyo kala duwan oo midab ah iyo qaabka qaybaha stem.
Gogol-xaadireedka Schlumbergera waxay u muuqataa mid aad u xiisa badan. Iyada oo daryeel fiican ee ubaxyada ku dhowaad ma arki karto afkoda. Xilliyada qaboobaha, nooca zygocactus noociisa ayaa ah mid xasuusta guga, Cherry blossoms iyo farxad indhaha milkiilaha. Qaar ka mid ah beeralayda ayaa isbarbardhigaya godka cad.
Hoos waxaa ku yaal sawir waa nooc ubax ah noocyada zigokaktus leh magaca Cilad cad.
Haddii aad ku beerato dheriyo badan oo isku dhejis ah, waxaad heleysaa halabuurka kala-duwan ee midabada leh - isku dhafan.
Daryeelka guriga ee isku dhafan ee Schlumbergers waa isku mid ah noocyada kale ee zygocactus.
Hoosta kuxirta sawirada Schlumberger.
Zigokaktus ayaa soo gaabisay ilaa 50 cm, xaashiyo-qaybo ilaa 6 cm oo dheer iyo illaa 3.5 cm ballaaran ayaa lagu rinjiyeeyaa midabka cagaaran, kuna dhameyna ilkaha fiiqan, iyo ubaxyo laba qoyn leh oo tufaaxa ah ayaa dib u xajistay iyagoo hoos u dhajiya xiiran iyo lilac si cad-casaan ah.
Kuwa ugu caansan waa ubaxyo casaan leh, laakiin hoosku wuu kala duwanaan karaa, waxaa jira xitaa dhirta oo leh isbedel siman oo ka soo baxa midab-ciriiri leh oo midabkeedu casaan yahay.
Schlumbergera ayaa la jaray ka dib markii ubax meeshii ubaxa, midho u muuqda foomka of a berry casaan-cas.
Zigokaktus noocyada kala duwan kama badna 30 cm, waxaa lagu gartaa glossiness caws iyo qaybaha salka ah ee caleemo iyada oo aan la jarjarin iyo xaglo ba'an.
Ubaxyada waxay leeyihiin faracyo badan oo calaamad ah oo leh faro guduudan, midab casaan ah ama midab casaan leh iyo tuubo pedunji ah.
Meelaha Russelian iyo kuwa la soo gaabiyo ayaa si tartiib tartiib ah u noqonaya kuwo aad u badan: Sababtoo ah xasilooni korodhsiimo, fududaan iyo xarrago badan, waxay si tartiib ah uga soocaan Buckley, oo leh muuqaal dhaqameed badan, iyo laga yaabee, inay ku caajiso beeralayda dalbaday.
Qulqulaya Cream Golden waxay jecel yihiin milkiilayaasha leh ubaxyo waaweyn oo jaale ah illaa dahabka dahabka ah. Iyada oo diiqad madow ah December, waxay xusuusinaysaa qorraxda xagaaga diiran.
Waxa xiiso leh, ubaxyada huruudka ah ee jaalaha ah ayaa loogu talagalay beerista ubax mid ka mid ah hawlaha ugu adag ee la xidhiidha isdhexgalka ee Schöntomberger: midabkani waxa uu ka maqnaa palmer Decembrist.
Noocyada kala duwan ee zigokaktusa waxay leeyihiin tufaaxa laga bilaabo cadaan ilaa qallalan casaan iyo taako dhaadheer oo leh boodh huruud ah dhamaadka.
Markaad ubaxeyso wax wuxuu u eg yahay carnation.
Ubaxyo kala duwan oo ka mid ah midabka casaan-lilac ee soo jiidanaya aragtida dibedda daaqada, ku dar midab si xajmiga caanaha ah ee maalmaha November iyo December. Qaabka ubaxa iyo caleemaha jariidada waxay u egtahay Bouckley.
Kala duwan oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah ayaa leh xadka jaalaha ah iyo caddaanka ah ee qaybaha stem. Ubaxku waa caddaan ahaan xuduudaha guduudan-xargaha oo u muuqda in ay ku faafaan geesaha tafaariiqda.
Kala duwan ayaa ka muuqda midabka kale ee aan caadiga ahayn ee ubaxa. Caleenta cagaarka ah ayaa si tartiib tartiib ah u kordhisa dhinaca geesaha ee tufaaxa, taas oo siinaysa warshad si tartiib ah iyo waqti isku mid ah.
Madonna Danse - qurxinta qoob-ka-ururinta dadka zigokaktus.
Schlumberger Gertner - Xayawaan caadi ah oo ka mid ah noocyada kale ee zigokaktus, waxaa lagu kala saaraa ubaxyo casaan-casaan ah, oo u eg duullo la jeexay, caleemaha waaweyn.
Schlumberger waa wax aan la qabin oo yarna u nugul cudurka. Daryeelka fudud, Deyrta ayaa awood u leh inay ku soo jiidato oo ay ku farxaan milkiilayaasha laga bilaabo December ilaa Febraayo, iyo noocyada kala duwan ee noocyada iyo noocyada ay sameeyeen growers badan ayaa jecel yaqannadan.